ယာဉ်ကြောအကျပ်တည်းဆုံး နေရာနှစ်ခုတွင် စည်းကမ်းလိုက်နာရန် စတင်ပြုလုပ်
ရန်ကုန်မြို့တွင် ယာဉ်ကြောအကျပ်တည်းဆုံး နေရာနှစ်ခုဖြစ်သည့် မင်္ဂလာဈေးမီးပွိုင့်နှင့် တာမွေအဝိုင်းတွင် တစ်နေရာလျှင် ယာဉ်ထိန်းရဲ ၆၄ ဦးဖြင့် စုစုပေါင်း ယာဉ်ထိန်းရဲအင်အား ၁၂၈ ဦးက စည်းကမ်းလိုက်နာမှု အ...
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တင် အပျော်စီးသင်္ဘောများစွာ ဝင်ရောက်ရန်ရှိ
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တင် အပျော်စီးသင်္ဘောများစွာ ဝင်ရောက်ရန်ရှိပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ် ဧပြီလထိ အပျော်စီးသင်္ဘော ၂၃စင်းဝင်ရောက်ရန် စာရင်း ပေးထားကြောင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မ...
အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် မဟုတ်သောနေရာများတွင် အမှိုက်များစွန့်ပစ်ပါက ဒဏ်ငွေကျပ် တစ်သောင်းမှ ငါးသိန်းထိ ချမှတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးစည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ ဌာနခွဲမှူး ဦးစိုးတင့်အောင...
Policewoman helps foreigner find back her cellphone
Hung Bi-Qing,aformer-tourguide-turned-policewoman, the other day helpedaCanadian woman Maya to find her cellphone. Hung said that she recalled when she was alone abroad leading tours, so she helpe...
Kaohsiung Women Brigade heldafree reading class for the first time
Kaohsiung City Police Department Women and Children Protection Brigade (WCPB) will holdafree reading class for children from January 29th to February 12th. Targeted audience are children from new re...
Cross-strait visitors account is expected to reach 10,000,000 milestone this year
According to NIA statistics, the number of Mainland tourists coming to Taiwan is 520,000 and those who travel in tours reached 1,680,000 in 2013. In 2014, the number of tourists travelling in tours re...
Total 70008list items , in 5896 / 7001 pages